Qaar dadkii ku dhaawacmay dagaalkii Buuhoodle oo la keenay cisbitaalka guud ee Galkacyo & kuwa kale oo weli wadada ku soo jira. – Radio Daljir
Maajo 26, 2010 12:00 b 0
Galkacyo, May 26 – Waxaa caawa la soo gaarsiiyey magaalada Galkacyo qaar ka mid ah dhaawicii dagaaladii dhawr maalmood ka hor ku dhex maray magaalada Buuhoodle ee gobolka Cayn ciidamada Itoobiya iyo dhacabka Buuhoodle.
Sida ay xaqiijiyeen hawl-wadeenada cisbitaalka guud ee Galkacyo, waxaa la keenay 4 qof oo dhaawacyo halis ahi ay soo gaareen, halka dhawr iyo toban kalena ay wadada ku soo jiraan.
Dadka dhaawaca ah ayaa ay ahayd in maalmo ka hor la keeno Galkacyo, waxaase hakiyey roobab lixaad leh oo ka da’ay inta u dhaxaysa gobollada Cayn & Mudug.
Guddiga caafimaadka iyo shaqaalaha cisbitaalka ayaa 48-kii saac ee la soo dhaafay heegan ugu jiray qaabilaada dadka dhaawac ah.
Guddiga caafimaadka ee gobolka Mudug ayaa sidoo kale sheegay in ay u diyaar garoobeen daryeelka dadka dhaawaca ah, ayna filayaan in ay dabooli doonaan baahidooda.
21-kii bishan ayaa magaalada Buuhoodle waxaa ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac u badan dad rayad ah oo ka gadooday ciidamo Itoobiyaan ah in dhawaale saldhigyo ka samaystay dhinac galbeed ee magaalada Buuhoodle.
Kulankii Baaqa Nabadda Somaliya oo Axadii, 23-ka May ka dhacay magaalada Minneapolis, MN.